Vidio: Ahịa Ahịa nke Pinterest | Martech Zone
Thursday, May 10, 2012 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Enwere m mmasị na infographics, yabụ mgbe m hụrụ nnukwu ihe ọmụma vidiyo, enwere m ike ịnwekwu ozi. Pinterest na-aga n'ihu na-eto eto na oghere mmekọrịta mmadụ na-ekele ya aesthetics visual, nkesa dị mfe na ịdị mfe nke iji. Anyị na-enwe a Infographics Ahịa banye ebe ahụ nke ahụ bụ ihe ewu ewu ma nwee ọtụtụ okporo ụzọ laghachi na saịtị anyị. N'oge ụfọdụ, Pinterest bụ otu n'ime ndị nrụgide siri ike anyị na-ezo aka n'okporo ụzọ. Ndị ụlọ ọrụ elebara anya ma jiri Pinterest na-agbasawanye iru ha.
Kudos ka Mgbasa Ozi MDG na a kediegwu video infographic.
Tags: eduzieduzi na pinterestPinterestndu pinterestvidiyo pinterest
Vidio: Atụmatụ Ọchụchọ Obodo bụ Igodo maka Branddị Nchịkwa